बाँदरलाई पछाडिबाट पोखरीमा धकेल्नेको यस्तो भयो हाल » खबरहरुको एउटै केन्द्र
बाँदरलाई पछाडिबाट पोखरीमा धकेल्नेको यस्तो भयो हाल
शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १३:३३ मा प्रकाशित !
बाँदर जंगली जनावर हो । यो हिंस्रक हुन्छ । यसलाई जिस्काउनु भनेको दुर्घटनालाई निम्त्याउनु हो । तर कितपय मानिसहरु बाँदरलाई जिस्काउन मनपराउँछन् ।
अनि त्यस्ता मानिसलाई बाँदरले आफ्नो दाँत तथा नङ्ग्राको करामत देखाउन पछि पर्दैन । आज हामी तपाईलाई यस्तै एउटा बाँदरले आफूलाई जिसकाउने मानिसलाई सिकाएको पाठको एउटा भिडियो देखाउँदै छौं ।
भिडियोमा देखाईएअनुसार चीन स्थित जीतिन मन्दिरको प्राङ्गनमा रहेको पानी पोखरीको डीलमा शान्त स्वभावमा बसिरहेको बाँदरलाई एक प्रयाङ्कस्टरले पानीमा धकेलिदिन्छ । आफूलाई बिनाकारण कसैले पछाडिबाट उधोमुन्टो हुनेगरि धकेलेपछि को पो रमाउथ्यो र । अझै बाँदरले यस्तो अवस्थामा खुशी मान्ने कुरै भएन ।
धार्मिकस्थलको प्राङ्गनमा रहेको पानी पोखरीको रेलिङमा यहाँ आउने पर्यटक तथा धर्मावलमबीहरुबाट केही खान पाइन्छ कि भनेर सान्त स्वभावमा वसिरहेको बाँदरलाई खानेकुरा दिनुको सट्टा धकेल्नु कुनै पनि हिसाबले ठीक हुँदैहोइन । मानिसलाई त यो प्रयाङकस्टरको उपद्रो मनमरेन भने बाँदरहरुलाई मनपर्ने कुरै भएन ।
अनि आफूलाई धकेल्ने प्रयाङ्कस्टर बिरुद्ध जाइलाग्यो बाँदर । सहपाठी बाँदरहरुलाई सहयोग गर्नुपर्यो जनाउने स्वरमा बाँदर करायो र ती प्रयाङ्कस्टर बिरुद्ध जाइलाग्यो । अनि आफ्नो सहपाठीको रोदनमा अरु बाँदरहरुपनि जम्मा भैदिए र समस्या आइपर्यो यी प्रयाङ्कस्टरलाई ।
त्यसपछि के भयो, हेर्नुहोस् यो भिडियो।
PREVIOUS POST Previous post: वाइसीएलको माग : ग्यारेजमा थन्क्याइएका गाडी नचलाए रुट प्रमिट खारेज गर
NEXT POST Next post: सवारी साधनको इजाजत रद्द गर्ने सरकारको तयारी
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १३:३३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १३:३३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १३:३३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १३:३३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १३:३३